DF Somaliya oo Dacwad cusub ka gudbisay Kenya, ‘‘Sharciga caalamiga ah ayay ku xad-gudubtay‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo Dacwad cusub ka gudbisay Kenya, ‘‘Sharciga caalamiga ah ayay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in ay ku xad-gudubtay sharciga caalamiga ah ee duulista hawadda kadib markii diyaarad ka soo duushay Magaaladda Nairobi ay si toos uga degtay magaalada Kismaayo.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka ayaa qoraal u dirtay Hay’adda duulimaadyada rayidka ah ee Qaramadda Midoobay ee ICAO, kaasi oo loogu dacwoonayay Talaabadda Kenya ay qaaday.
Diyaaradii Sabtidii ka degtay magaalada Kismaayo oo nooceedu ahaa F/50 ayaa la sheegay in shatiga ay isticmaashay laheyd shirkadda Jubba Airweys, iyadoo uu lahaa diyaaradan ganacsade Soomaaliyeed.
Dhanka kale, Warar hoose oo ay haleyso mareegta Halqaran.com ayaa sheegaya in diyaaradaan ay sidoo kale wafdi ka soo qaadi doonto Magaaladda Garoowe ee caasimadda Puntland, si ay kaga qeyb galaan Caleema saarka madaxweyne Axmed Madoobe.
DF Somaliya oo Dacwad cusub ka gudbisay Kenya
sharciga caalamiga ah ayay ku xadgudubtay